​धेरै रक्सी पिएपछि किन हुन्छ ह्याङओभर ? के हो छुट्कारा पाउने उपाय ?
Monday,7Jan, 2019 1:38 PM
२३ पुस, काठमाडौं । ‘हिजो साँझ रक्सी पिएको, अलि धेरै नै भएछ अहिलेसम्म ह्याङओभर सकिएको छैन’, भोलिपल्ट कतिपयले भन्छन् । धेरै पिएर नै ह्याङओभर भएको धेरैले ठान्छन् । हिलसा माछाको अचार या अण्डा खाए ह्याङओभर हट्ने विश्वास पनि धेरैले गर्छन् ।